ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၃-၇-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၃-၇-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
- ရခိုင်အရေးအခင်းအတွင်း အာဏာပိုင်များ စစ်ဆေးစဉ် တရားခံ ၁၂ ဦး သေဆုံး click
- သံတွဲတွင် မြို့ခံမဟုတ်သော လူတစုက နေအိမ်များ ဖျက်ဆီးသွားသည်ဆိုခြင်း စစ်ဆေးနေ click
- UWSA နှင့် အစိုးရ ဆက်ဆံရေးရုံး ပိတ်သည်အထိ ဆက်ဆံရေး တင်းမာ click
- မြန်မာစစ်တပ် အဘက်ဘက်သို့ အင်အားဖြည့်၊ တောင်ပိုင်း ၀ တပ်လှန့်တုန်လှုပ် click
- မြန်မာစစ်တပ် လက်နက်ကြီးကြောင့် သက်ကြီးတဦး သွေးလန့် သေဆုံး၊ ဘုန်းတော်ကြီးများနှင့် ရွာသားများ ထွက်ပြေးနေရ click
- ရှမ်းဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် အစိုးရတပ်များ တပ်စွဲထား၍ သံဃာတော်များ တိမ်းရှောင်ပေးကြရဟုဆို click
- မြစ်ကြီးနား-ဖားကန့် သွားလမ်းတလျှောက် အစိုးရတပ် ဂိတ်များတွင် ငွေကောက်ခံနေ click
- မြစ်ကြီးနားတွင် ကေအိုင်အိုအဖွဲ့ ရုံးပြန်ဖွင့်ရန် ပြင်ဆင် click
- ဂျေယန့်ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ငှက်ဖျားရောဂါ ကူးစက်ပြန့်ပွားနေ click
- စစ်ပွဲကြောင့် ပလောင် ကလေး ၁,၀၀၀ ကျော် စာသင်ကြားခွင့် မရသေး click
- စစ်တပ်သိမ်းထားသည့် လယ်ယာမြေများ ပြန်ရရေး တောင်သူများကြိုးပမ်းနေ click
- ဆယ်စုနစ်ကျော် ပိတ်ထားခဲ့သည့် စိုက်ပျိုးရေးကျောင်း ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မည် click
- တရားစွဲခံရသည့် အင်းလေးဒေသခံ ခုနစ်ဦး ငွေကြေး အခက်အခဲဖြစ် click
- ရွှေ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း စိတ်ချရသည့် အနေအထား မဖြစ်သေး click
- မြန်မာပြည်အခြေစိုက် တရုတ်ကုမ္ပဏီများ မီဒီယာနှင့် တွေ့မည် click
- နိုင်/ကျဉ်းများ ပြန်လွှတ်ချိန်တွင် ထောက်လှမ်းရေးဟောင်းများ လွတ်မည်မဟုတ် click
- မြန်မာ့သမိုင်း အရိပ်မည်းနှင့် အကဲဆတ်သည့် လူထုကို နိုင်ငံတကာမီဒီယာများ ထည့်စဉ်းစားရန် သမ္မတ ပြော click
- တပ်မတော်သား လွှတ်တော်အမတ်များကို လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သတိပေး click
- လွှတ်တော်ရုံး တည်ဆောက်ဖို့ မြေနေရာအတွက် လူနေအိမ်များ ဖယ်ရှားမှုအပေါ် ဝေဖန် click
- ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်း ကုန်ကျငွေ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာနှင့် သုံးစွဲရန် ကာ/လုံ ဆုံးဖြတ် click
- ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေးကို အမေရိကန် ဒဏ်ခတ်မှု စာရင်းသွင်း click
- ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေးကို အမည်ပျက်စာရင်းသွင်းမှု အမေရိကန်-မြန်မာ ဆက်ဆံရေးကို မထိခိုက် click
- ကာချုပ်ရဲ့ ရုရှားခရီးစဉ်မှာ ဦးတေဇလည်း ပါ click
- သူရဦးရွှေမန်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယကရာထူး သြဂုတ်လတွင် လွှဲယူမည် click
- အဆင့်မြင့်ပညာရေးဥပဒေ ယခုလွှတ်တော်အတွင်း ဆွေးနွေးမည် click
- ဝါဒဖြန့်မှုကို ကာကွယ်ရန် နယ်ခြားစောင့် တပ်သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း click
- ချောင်းဦးတွင် ဗုံးဟောင်းနှစ်လုံး တွေ့၍ ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီး click
- ရခိုင်ဒေသအတွင်းရှိ လွှတ်တော်အမတ်များကို နိုင်ငံသားဟုတ်မဟုတ် စိစစ်ဆဲ click
- ရခိုင်ဒေသ ဒုက္ခသည်စခန်း လူဦးရေစာရင်း ကောက်ခံမှု အခက်အခဲ ရှိဆဲ click
- ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ဒုက္ခသည်အားလုံး ယခုတပတ်အတွင်း အမိုးအောက် အပြီးပြောင်းရွှေ့မည် click
- မြောက်ဥက္ကလာတွင် ဗလီ၌ သံဃာများကို ဆွမ်းကပ်၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေး click
- အထင်အမြင်လွဲမှုတွေ ပျောက်စေဖို့ သံဃာတော်တွေကို မွတ်ဆလင်တွေ ဆွမ်းကပ် (ရုပ်သံ) click
- လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု ဖြေရှင်းရန် နိုင်ငံတကာနှင့် ပူးပေါင်းမည် click
- ၂ နှစ်သား ဒီမိုကရေစီ ဆက်ပြီး ဖွံ့ထွားစေချင် (သူ့အတွေး သူ့အမြင်) click
- ရန်ကုန်ကို ကိုင်လှုပ်သော ထို ၇ ရက် - အပိုင်း (၂) click
- အားလုံးအတွက် ဒီမိုကရေစီပညာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု (သူ့အမြင်) click
- မြွေတောင်၊ ဖားတောင်အရေးနှင့် ချင်းပြည်သူ၏ အနာဂတ် (ဆောင်းပါး) click
- Ooredoo ကုမ္ပဏီအား မြန်မာနိုင်ငံမှ ကြိုဆိုသင့်ပါသည် (အယ်ဒီတာ့အာဘော်) click
- ထိုင်းဘုရင့်သမီးတော် မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ် (ဓာတ်ပုံ) click
- ထိုင်းနိုင်ငံမှ ကုန်းလမ်းဖြင့် ဝင်လာသည့် နိုင်ငံခြားသားများကို ၁၄ ရက် ဧည့်ဗီဇာ ပေးမည် click
- ဓာတ်လှေကား ကြိုးပြတ်ကျ၍ ထိုင်းနိုင်ငံရှိ မြန်မာအလုပ်သမား ၅ ဦး ပြင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာရ click
- ဆာမူရိုင်းဂိုဏ်းကြောင့် ထိုင်းရောက် သျှမ်းများ အကျပ်အတည်း ရင်ဆိုင်နေရ click
- မြန်မာ-အိန္ဒိယ နယ်စပ်ဈေးများ ၁၀ ခု ဖွင့်လှစ်ရန်ရှိ click
- မူဆယ်မှ လယ်ယာထွက်၊ ရေထွက်၊ သစ်တောထွက်များ အဓိက တင်ပို့နေ click
- ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်တွင် စက်မှုလယ်ယာ ဆောင်ရွက်မှု ရာနှုန်းပြည့် ပြီးစီးနေပြီဟု ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး ပြော click
- ဝန်ထမ်းသစ် ရွေးချယ်ရာ ဝေးလံခေါင်ပါးသည့် ဒေသသို့ ၅ နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်မည့်သူ ဖြစ်ရမည် click
- ဖုန်းဖြင့် ငွေလွှဲနိုင်မည့် အသေးစား ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှု သြဂုတ်လတွင် စတင်မည် click
- ဘဏ်ခွဲမရှိတဲ့ ကျေးလက်တွေကို ဖုန်းနဲ့ ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှု ပေးမည် click
- ကျောက်မျက်ရောင်းချပွဲမှ ယူရို ၂ ဘီလီယံနီးပါး ရရှိ click
- ပြည်တွင်းတွင် ပျောက်ကွယ်တော့မည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သယံဇာတများပြပွဲ click
- မြန်မာ ၃ ဦး ဘိန်းဖြူများနှင့်အတူ ထိုင်းတွင် ဖမ်းမိ click
- မြန်မာနိုင်ငံသား ၃ ဦးထံမှ ဘတ်သန်း ၁၀၀ နီးပါး တန်ဖိုးရှိ ဘိန်းဖြူများ ဖမ်းမိ click
- HIV ပိုးရှိသူများကို WHO လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း ဆေးပေးနိုင်ရန် ၃ နှစ် စောင့်ရဦးမည် click
- အလုံဓားပြမှု သံသယရှိသူများကို နာရီဝက်အတွင်း ဖမ်းမိ click
- စားဝတ်နေရေး မပြေလည်သည့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဦး ဆွဲကြိုးချ သေဆုံး click
- ရန်ကုန်-မန္တလေး မော်တော်ယာဉ်လိုင်းသစ် ထပ်မံဖွင့်လှစ်မည် click
- တောင်ကြီး မြို့မဈေး မြောက်ဘက်လမ်း နေ့စဉ် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုဖြစ် click
- မြစ်ကို တံတားထိုးပါလို့ ဒလမြို့တော် ခေါ်ကြမလားမောင် (ရုပ်သံ) click
- ၆ လကျော် ကြာပြီဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားကောင်စီ ရုပ်ရှင်ဥပဒေမူကြမ်း click
- ဆင်ဆာမဲ့ ဗွီစီဒီနှင့် ဒီဗွီဒီများ ဖျက်ဆီး (ဓာတ်ပုံ) click
- စာမသင်ဘဲ ရာထူးတိုးသည့် ဆရာမကို ပြည်နယ်အဆင့် စစ်ဆေးမည် click
- မြန်မာအမျိုးသမီးများနေ့ လွိုင်ကော် မြို့တော်ခန်းမတွင် ကျင်းပ click
- ကလေးမွေးဖွားနှုန်း မြင့်မားခြင်း (ဆောင်းပါး) click
- ယဉ်ကျေးမှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူများ၏ မြန်မာ့ဆိုင်း တိုကျိုတွင် ဖျော်ဖြေ (ဓာတ်ပုံ) click
- ယဉ်ကျေးခေတ်မီ မေပန်းချီ မြန်မာ့အမျိုးသမီး ဆင်ယင်ထုံးပြပွဲနှင့် တော်ဝင်စံထား မြန်မာ့နှစ်ပါးသွား (ရုပ်သံ) click
- အမှိုက်ပုံ မီးရှို့ပြီး ရဲကား မှန်ခွဲမှု မင်းအုပ်စိုးကို ထောင် ၃ လ၊ ငွေ ၆ သိန်း ပေးရန် တရားရုံး အမိန့်ချ (ရုပ်သံ) click
- အမာရွတ်တွေ မရှိပါဘူး (အင်တာဗျူး) click
- ဆီဒိုးနားဟိုတယ်တွင် Romantic Wedding Fair 2013 ၂ဝ၁၃ ပြသမည် click
- မိုးနေ့တွေကို ပျော်တဲ့ ပန်းချီဆရာ ၉ ဦး၏ ပန်းချီပြပွဲ click
- မြန်မာနိုင်ငံသား မျက်လှည့်ပညာရှင် Mr.Top ရဲ့ မျက်လှည့်ပြပွဲ အပိုင်း - ၂ (ရုပ်သံ) click
- အာကာသစခန်းက သင်ခန်းစာ တိုက်ရိုက်ပို့ချ ဆွေးနွေးခြင်း (ဗွီဒီယို) click
ဝန်ထမ်းတွေကို ပုံပြင်တွေပြောပြီး အသုံးချမှူတွေ မလုပ်ကြပါနဲ့တော့
ဆိုရှယ်လစ်တုန်းကလဲ ပါတီကေဒါတွေနဲ့ ရောထွေးပြီးလုပ်ခဲ့ကြတယ်
တကယ် လောကပါလတရား ထွန်းကာမဲ့နေရာ ရောက်မတတ် ပြောခဲ့ကြ
တယ်။ အဲဒိဇတ်ထဲမှာ အဆင်ပြေတဲ့ သူလဲပြေတယ် ပါတီသန့်စင်ရေးတွေ
ကြောက်လို့ မခိုးခဲ့တဲ့ သူတွေက ဘာမှမရှိဘူး ခိုးခဲ့ တဲ့ သူတွေက အဆင်ပြေ
ကြတယ်။ နဝတ နယက ခေတ်တွေမှာလဲ ဒီလိုပါပဲ။
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဝန်ထမ်းဆိုတာလဲ ပြည်သူထဲက ပြည်သူပါပဲ။ ကိုယ်ချင်းစာတ
ရားလက်ကိုင်ထားစေချင်ပါတယ်။ ကိုယ့် ကုလားထိုင်ရရေး တည်မြဲရေးအ
တွက် ဝန်ထမ်းမိသားစုတွေကို အသုံးမချစေချင်ဘူး အစီအစဉ်ရှိနေရင်လဲ
Hurricane Sandy .... ပြောတာ လက်ခံတယ် ။
အခုလို ကြိုးချည်ထားတဲ. လှေကို ........ မဖြုတ်ဘဲ လှော်နေလို. ရှေ့မရောက်နိုင်ဘူး ။